Ciyaartoyda Horyaalka Premier League Ayaa Diidan In Lagu Ciyaaro Garoon Bilaa Taageerayaal Ah Sida Uu Qoray Wargeyska Mirror Sport? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Ciyaartoydu waxay diyaar u yihiin inay ku diidaan qorshayaasha ay ku hormarinayaan ciyaaraha ka dambeeya albaabada xidhan.
Wargayska Mirror Sport ayaa fahansan in ciyaartooyda heerarka kala duwan ee ciyaarta ay ka soo horjeedaan in dib loo bilaabo kulamada iyada oo aan wax taageerayaal ah la helin coronavirus-ka.
Waxa ay walaac weyn ka muujiyeen Ururka Kubadda Cagta ee xirfadleyda ah ka dib markii Premier League iyo EFL ay sare u qaadeen suurtogalnimada isbuucii hore.
Horyaalka Premier League ayaa xitaa sameeyay qorshe ay dib ugu soo laaban doonaan albaabada xirnaa ilaa horaanta 2/3 si ay kubada cagta mar kale u socdaan madaama ay cadaadis xoogan kala kulmayaan shirkadaha TV-ga si ay u gutaan kulamadooda ama ay qatar ugu jiraan inay boqolaal milyan oo ginni ku qarash gareeyaan TV-ga milyaariga badan qandaraasyada.
Ciyaartoyda way ku adkeystaan ​​inaysan dooneyn inay ka ciyaaraan albaabada dambe sababtoo ah:
Waxay ka baqayaan nabadgelyadooda iyada oo digniinaha adag ee dawladda ee ku saabsan fogeynta bulshada, Waxayna qatar gelin kartaa qoysaskooda haddii ay markaa bukoodaan.
Culays dheeri ah ayaa la saari doonaa adeegyada gurmadka degdegga ah ee leh ambalaaska, dhakhaatiirta caafimaadka iyo amniga ayaa loo baahan doonaa waqti markii horeba loogu fidinayay xadka.
Ma doonayaan inay ku ciyaaraan garoomo faaruq ah iyada oo taageerayaasheeda daacada ah lagu xidho.
Walaacyada waxaa u gudbinaya maamulka ‘PFA’ mas’uuliyiinta kubada cagta iyadoo ciyaartoydu ay sheegeen inay ka soo horjeedaan fikirka guud ahaan.
Madaxa PFA Gordon Taylor ayaa yidhi “Ciyaartoygu waxay leeyihiin walaac iyo wax la fahmi karo sidaa darteed ma ahan xulasho aan door bidno laakiin wax walba waa in haatan laga daawadaa”
Waxaa jira xaqiiq ka dhex jirta ciyaartooyda in horyaallada ay ku tiirsan yihiin lacagta caddaanka ah ee TV-ga, maaddaama xiisadda ay sii weynaaneyso oo haddii howsha ay ka baxdo xagaaga, waxaa lagu soo deyn doonaa cadaadis weyn iyadoo kooxaha ku dhibtoonaya inay sii noolaadaan.
Mirror Sport ayaa daaha ka qaaday isbuucii hore in kooxaha qaar ay ka baqayaan in NEXT SEASON uu albaabada ka xiro madaama uusan qofna ogeyn inta uu daahi doono.
Si kastaba ha noqotee, shirkii degdega ahaa ee Premier League Khamiisti hore ayaa la soo gabagabeeyey iyadoo la aqbalay guud ahaan in marka kulamadu ay dib u bilaabaan markaasi ay noqon doonaan kuwa albaabada xidhan.
Kubada cagta oo dhami waa la hayaa ilaa iyo 30ka Abriil halka Premier League iyo EFL ay ku dhiirigelisay kooxaha inay ka fogeeyaan ciyaartoyga inay ka fogaadaan garoomada tababarka si ay qayb uga noqdaan xidhitaanka.
Ciyaartoyda sidoo kale walwal kama qabaan tababarka maadama jimicsiga loogu tala galay “dhibco kulul” si u faafo viruska hadana naadiyada badankood hada waxay dejiyeen qorsheyaal jimicsi shaqsiyadeed oo ay guriga ka sameyn karaan.